Bubata ụgbọ ala si Canada gaa UK | Importgbọ M Mbubata
Na-ebubata ụgbọ ala Canada na United Kingdom?
Anyị bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ mgbe anyị na-ebubata ụgbọ ala na UK, yabụ kama ịnwale usoro a naanị, anyị na-atụ aro iji ọrụ anyị iji mee ka ndụ dịkwuo mfe.
Gbọ njem si na Canada gaa United Kingdom
Mbupu si Canada na-eme site na Vancouver ma ọ bụ na Toronto, anyị na-ahazi usoro niile site na nnakọta, ụgbọ mmiri dị n'ime ala, mbupu, omenala, ule na ndebanye aha. Nweta ego si n’aka anyị maka ahaziri iji tinye ụgbọ ala gị si Canada gaa UK.
Nnukwu ụgbọ ala n'ime ụgbọ ala
Anyị nwere nnukwu ndị ọrụ na Canada ndị na-enyere aka na mbupụ na mbupụ ụgbọ gị na UK, ga-ahazi nchịkọta ụgbọ gị site na adreesị gị ma ọ bụ adreesị nke onye ị zụrụ ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Anyị na-enye ọrụ ụgbọ njem emechiri emechi ma ọ bụ mepere emepe iji mezuo ihe niile achọrọ na mmefu ego. Anyị ga-ebupụziziri anyị ụgbọala ahụ n’ọdụ ụgbọ mmiri kacha nso.
Logbọ Ala Ibu & Mbupu
Mgbe ụgbọ ala gị rutere n’ebe anyị na-ebusa akwụkwọ, anyị ga-ebuba ya n’ime ngwongwo ụgbọ mmiri ya na iji nlezianya na nlebara anya. Ndị ọrụ aka anyị nọ na Canada ka ahọpụtara aka maka ahụmịhe ha na nlebara anya zuru ezu mgbe ha na-eji ụgbọ ala nkọwa nkọwa. Ha ga-ahụ na ụgbọ ala gị kwụlitere n'ime akpa dị njikere maka ibuga UK.
Anyị na-enye mkpuchi mmiri nke na-ekpuchi ụgbọ gị ka ọ bụrụ uru zuru oke ya n'oge njem.
Mgbe ị na-ebubata ụgbọ ala si Canada gaa UK, ịnwere ike ịme ya kpamkpam ụtụ isi ọ bụrụ na ịnwe ụgbọ ala ahụ opekata mpe ọnwa isii ma biri na mpụga EU ihe karịrị ọnwa 12.
Ọ bụrụ na njirisi ndị a anaghị emetụta mgbe ahụ ụgbọ ala wuru na EU ga-akwụ ụgwọ £ 50 ọrụ na 20% VAT, dabere na ego ị kwụrụ maka ụgbọ ahụ, ndị wuru na mpụga EU na-abata na 10% ọrụ na 20% VAT.
Imirikiti ugbo ala ndị karịrị afọ 30 ga-eru maka 5% mbubata VAT na enweghị ọrụ mgbe a na-ebubata, na-enye na ha agbanweela nke ukwuu site na ojiji mbụ ha ma achọghị ka ọ bụrụ onye ọkwọ ụgbọala gị kwa ụbọchị.
Mgbe ị batara na UK, ụgbọ gị ga-edo ọtụtụ ule na mgbanwe iji hụ na ọ ruru ụkpụrụ ụgbọ ala UK.
Mgbanwe ndị kachasị gụnyere mgbanwe maka ọkụ mgbaàmà na ụgbọ ala ahụ. Ugbo ala ndị US na ndị Canada rụpụtara na-enwe akara ngosi dị iche iche, nke a na-etinyekarị n'ime bọlbụ ọkụ breeki. Ha nwekwara ọkụ dị iche iche na-acha agba dị iche iche ma na-enweghị ihe ngosi n'akụkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ.
Anyị ga-agbanwe ụgbọ ala gị ka ọ bụrụ ụkpụrụ UK site na iji teknụzụ ọkụ na-adịbeghị anya n'ime ụlọ, na-enye anyị ohere ịmechaa mgbanwe niile dị mkpa ma debe ụgbọ ala gị.
Ugbo ala ebubata si Canada ndị na-erubeghị afọ iri ga-achọ ịnwale ule IVA tupu DVLA ga-akwado ndebanye aha. Dị ka naanị ụlọ ọrụ dị na UK nwere ụzọ nyocha nke IVA maka ụgbọ ala ndị njem, nke DVSA na ISO kwadoro, oge ọ ga-ewe iji mezue atụmatụ a nke ngwa ngwa bụ ngwa ngwa karịa iji ndị na-ebubata ụgbọ ala ndị ọzọ dị ka ụgbọ gị ọ dịghị mkpa ịhapụ saịtị anyị ma anyị na-achịkwa usoro ule.
Achọghị ule IVA maka ụgbọ ala gafere afọ iri, agbanyeghị na ọ ga-agafe MOT yabụ ọ ga-abụrịrị ihe kwesiri ekwesiri n'okwu banyere ọkụ mgbaàmà, ịkpụ taya, nkwusioru na breeki, nke anyị ga-enyocha n'ezie, iji bụrụ ekwesiri ka ebugharị ya n'okporo ụzọ UK.
Ọ bụrụ na ụgbọala ahụ karịrị afọ 40 ọ bụ MOT anaghị akwụ ụgwọ ma nwee ike ibuga ya na adreesị gị na UK wee debanye aha ya.
Ajuju ọ bụla ị nwere gbasara ịbubata ụgbọ gị si Canada gaa United Kingdom
Anyị enwere ike ịnyere aka na usoro mbupụ ụgbọ ala gị si Canada?
Ndị ọrụ mbupu anyị ga-agwa gị ihe ị ga-eme mgbe ị gafere nkwupụta gị. Usoro mbupụ ahụ dịgasị iche site na mba ruo na mba mana azịza ya dị nkenke bụ ee, anyị nwere ike inye aka.
Usoro mbupụ bụ obere ihe n'ọtụtụ mba mana ọ nwere ike iyi ihe mgbagwoju anya na anya mbu.
Nwere ike ịnakọta ụgbọ m?
Anyị ga-anakọta ụgbọ ala gị n'ebe ọ bụla na Canada wee nweta ya n'ọdụ ụgbọ mmiri maka gị. A ga-enyocha ya mgbe usoro a na otu ụgbọ mmiri, mkpuchi mkpuchi mmiri kpuchiri ya.
Na United Kingdom, anyị nwekwara ike ịmegharị ụgbọ ahụ site na netwọkụ nke ndị na-ebugharị ụgbọ ala tụkwasịrị obi.
Ego ole ka ọ bụ iji ụgbọ mmiri si Canada?
Nke a dabere na oge nke afọ, na ọnọdụ ahịa dị ugbu a. Anyị ga-anwa ịkọpụta gị ọnụahịa kacha mma maka ibuga ụgbọ gị na United Kingdom.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụ karịa mbupu si sịnụ, na East Coast n'ihi na anya.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji ụgbọ mmiri si Canada?
Ọ dabere na ebe ụgbọala ahụ dị. Mbupu si Canada site n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ na-ewe obere oge n'ihi nhazi nke ụgbọ mmiri. Ọ na-eme njem site na ọwa mmiri Panama na-apụtakarị na ọ ga-agbada n'akụkụ ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ America.
Ọ bụrụ na ụgbọala dị nso ikwu, New York, ọ nwere ike ịbụ ihe dị ka izu abụọ. Gbọ mmiri a na-ebupute ya na-ekpebi ogologo oge ụgbọ mmiri ahụ ga-adị n’oké osimiri.
Ị nwere ike gbanwee ụgbọ ala Canada m jiri ihe ngosi amber wdg?
Dị ka ọtụtụ ụgbọ ala si Canada ịdaba na ụdị ụgbọ ala US, ha ga-enwekarị ihe ndị a na-emebu dị ka ihe ngosi uhie.
Anyị na-enye otu ụdị ọrụ iji gbanwee ụgbọ ala gị ka ọ dabara.
A na-elekọta akụkụ niile nke ọkụ n'aha gị ka ọ bụrụ iwu kwadoro na njikere ịnya ụgbọ ala.
Anyị nwere ike ije ozi ma rụkwaa ụgbọ ala gị?
Ọ bụrụ na mbubata Canada ọhụrụ chọrọ obere ọrụ, echegbula. Anyị nwere ndị ọrụ igwe zuru ezu na saịtị dị njikere inyere aka na ọtụtụ ọrụ.
Wezụga mgbanwe ọkụ, anyị na-emeghachi ụgbọ ala zuru oke na mmezi n'ozuzu.
Uru nke ịnọ n'okpuru otu ụlọ bụ ọnụ ahịa dị ukwuu, yana ọrụ niile na-agụnye.
Ndị ọkachamara anyị na ụgbọ ala America ghọtara na ha ga-adịtụ iche na ihe ọ bụla ọzọ na anyị maara kpọmkwem ihe anyị na-eme.
Anyị na ụgbọ ala ndị si Canada na-emekọ ihe?
N'ime afọ ndị gara aga, anyị enyerela ọtụtụ ndị ahịa si Canada aka ibubata ọtụtụ oge ochie wee ghọta na ha nwere ike ịchọ mweghachi mgbe ha bịarutere United Kingdom ma ọ bụ na ha ga-achọ ịnyefe gị n'ihu.
Ihe ọ bụla ị na-ebubata anyị nwere ike inye aka na usoro dum.
Ugboro ole ka anyị na-esi Canada ụgbọ mmiri?
Nke a dabere kpamkpam na ọnụọgụ ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ na mpaghara izugbe.
Anyị na-agbalịkarị ịchịkọta mbupu ọnụ iji chekwaa gị ego. Ya mere ọ nwere ike ịbụ ozugbo ma ọ bụ izu ole na ole.
Enwere nhọrọ nke akpa akpa 20ft ma ọ bụrụ na ị na-eme ngwa ngwa!